किम जोङलाई भेट्नेहरू के भन्छन् ? | Ratopati
किम जोङलाई भेट्नेहरू के भन्छन् ?
एजेन्सी-बच्चामा उनलाई राजकुमार जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो । उनले आफ्नो पारिवारिक सेफलाई उनको बेइमानीका लागि माफ गरिदिका थिए । उनी बास्केटबल मन पराउँछन् र विद्यार्थीको रूपमा स्विजरल्यान्ड बस्दा उनसँग नाइकका थुप्रै जोडी जुत्ता थिए ।
यी तथ्यहरू उत्तर कोरियाली नेताका बारेमा उनलाई भेटेका मानिसबाट थाहा भएको कुरा हो । ३४ वर्षीया यी नेताले भर्खर मात्र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूलाई अघिल्लो हप्ता पहिलो पटक भेटे र दुई महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्दै छन् ।
किम विश्वका लागि रहस्य रहेका छन् । उनले आफ्नै काकालाई बेइमानीका लागि मृत्युदण्ड दिएको विश्वास गरिन्छ । तर हातको औँलामा गन्न सकिने उनलाई चिन्ने मानिसहरूले उनको बारेमा थप तथ्यहरू दिएका छन् । उनका विगतका स्कुले साथी र पश्चिममा शरण लिएका उनको परिवारको सदस्यहरूले दिएको जानकारीमा उनको नरम व्यक्तित्वको साक्षात्कार पाइन्छ ।
किमको बाबुको लानि खाना बनाउने जापानी सेफ किमको बारेमा थाहा पाउने महत्वपूर्ण स्रोत हुनसक्छन् । हुन त यी दुई सँगै रहँदा किम सानै थिए तर यी जापानीको पछिल्लो समय भएको उत्तर कोरिया भ्रमणले यसमा महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान गर्छ ।
केन्जी फुजिमोतोको उपनामले चिनिने ती सेफले किमको परिवारमा काम गर्दाको समयलाई दुई किताबमा लेखेका छन् । किमलाई उनको र फुजिमोतोको मातृभूमिबीच रहेको शत्रुताबारे ज्ञान थियो । जापानले कोरिया प्रायद्वीपलाई लामो समय उपनिवेश बनाएको थियो ।
“जब राजकुमार (किम) जोङ उनले मसँग हात मिलाए, उनले मलाई नराम्रो नजरले हेरे । “फुजिमोतोले सन् २००३ मा प्रकाशित गरेको आफ्नो सस्मरणमा ७ वर्षे किमसँगको पहिलो भेटबारे लेखेका छन् । सो भेटमा किम सैन्य पोसाकमा थिए र उनलाई उनका बाबुका सहयोगीहरूले राजकुमार सम्बोधन गरिरहेका थिए । “उनको आँखामा रहेको हेराइ म अझै बिर्सिन सक्दिनँ । त्यो हेराइमा यो पतित जापानीज हो भन्ने खालको हेराइ थियो ।”
फुजिमोतोले किम जोङ उन आफ्ना बाबुका ६ सन्तानमध्य सबैभन्दा प्यारो थिए भनेका छन् ।
किमको परिवारको लागि वर्षौं काम गरेपछि फुजिमोतो आफ्नो जन्मभूमि जापान भागे । जापानमा रहँदा उनलाई उत्तर कोरियाली जासुसको कारबाहीमा परिने डर हुन्थ्यो । त्यसैले उनी फरक परिचय लिएर लुकेर बसे । तर सन् २०१२ मा किमले उनलाई उत्तर कोरिया भ्रमण गर्ने निमन्त्रणा दिए । निमन्त्रणा स्वीकारेर फुजिमोतो राजधानी प्योङयाङ घुमेर फर्किए । सो समय किम राष्ट्रपति भइसकेका थिए ।
“भेटमा ‘कमरेड जनरल’ मुस्कुराए र मलाई भने– “तिम्रो बेइमानी बिर्सिइएको छ ।” फुजमोतोले सन् २०१२ को अन्तरवार्तामा भने । उनले किमको शासनमा जनताको औसत जीवनस्तर सुध्रिएको पाएको बताए ।
फुजिमोतोले लन्च मिटिङको समयमा किमको श्रीमती री सोल–जुको उलेख्य भूमिका देखेर अचम्मित भएको बताए । फुजिमोतोले किम सहज र खुसी तर परिस्थिति पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको पाएको बताएका थिए ।
सेफले लन्चका क्रममा भएको गफमा किम आफ्नो राष्ट्रमा परिवर्तनका लागि खुला रहेको पनि पाएको बताए ।
“कमरेड जनरलले मैले भनेको सबै कुरा सुने र मुलुकलाई विश्वसामु खुलाउन आग्रह गर्दा पनि उनले टाउको हल्लाए ।” फुजिमोतोले भने “किम जोङ इलले कहिल्यै त्यसरी शान्त भएर अर्काको विचार सुन्दैनथे ।”
परिवारका सदस्यहरूले पनि किमको स्वभावबारे सुनाएका छन् । विशेष सानोको किम बारेमा । तीमध्ये किमकि सानीआमा पनि एक हुन् । उनलाई उत्तर कोरियामा को–योङ सुक भनेर चिनिन्थ्यो । उनी आफ्नो श्रीमान री ग्याङका साथ सन् १९९८ मा अमेरिकाको शरणमा पुगेकी थिइन् । हाल सुरक्षाका लागि यी दुवैले फरक नाम प्रयोग गर्छन् ।
जोडीले किम जोङ उनलाई लगभग बीस वर्षदेखि भेटेको छैन । तर सन् १९९६ देखि २००० सम्म किम स्विजरल्यान्ड स्कुल पढ्दा किम उनीहरूको घरमा केही समय बसेका थिए । सन् २०१६ मा वासिन्टन पोस्टलाई दिएको लामो अन्तरवार्ता उनीहरूले किमबारे पनि बोलेका थिए ।
“ऊ छकछके थिएन तर ऊ झडङ्ग रिसाउँथ्यो र उनीसँग धैर्यको अभाव थियो ।” कोले भनिन् । “जब उनकी आमाले उसलाई धेरै नखेल र पढ भनेर कराउँथिन्, ऊ आमालाई जवाफ फर्काउँदैनथ्यो तर ऊ फरक तरिकाले विरोध जनाउँथ्यो, जस्तो खाना बोलाउँदा ऊ जाँदैनथ्यो ।”
उनको सानिआमाले भनिन किम उसको बाबुको आधिकारिक उत्तराधिकारी हो भनेर धेरै पछिसम्म संसारलाई थाहा दिइएन । तर यो कुरा किमलाई १९९२ देखि नै थाहा थियो ।
किमको आठौँ जन्मदिनको पार्टीमा उनलाई जनरलको युनिफर्म दिइएको थियो र त्यहाँ उपस्थित साच्चैका जनरलले निहुरिएर उनीप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए, उनले भनिन् ।
“उनका वरिपरिका मानिसले उनलाई त्यस्तो व्यवहार गरिरहँदा उनी सामान्य मानिस जसरी हुर्कन गाह्रो थियो ।” कोले भनिन् ।
अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी डेनिस रोडम्यानले सन् २०१३ देखि उत्तर कोरियाको ५ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । ती भ्रमणमध्य तीन पटक उनको किमसँग भेट भयो । यी दुई असम्भव मित्र भएका छन् ।
डिसेम्बर २०१७ मा रोडम्यानले स्टेफन कोलबर्टको टिभी कार्यक्रममा आफ्नो र किमको सम्बन्धबारे चर्चा गरे । “कुनै कारणले उनले मलाई विश्वास गरे ।” रोडम्यानले भने ।
उनले ती भेटहरूमा बास्केटबलबारे गफ भएको भने । सो खेल किमको मन पर्ने खेल हो, जुन उनी स्विजरल्यान्डमा स्कुलमा रहँदा खेल्ने गर्थे । रोडम्यानले बाँकीका लागि डरका पात्र रहेका किमको आफूले फरक पक्ष देखेको बताए ।
“उनी उग्रवादी होलान् तर मैले भने त्यो पक्ष देखिन ।” रोडम्यानले भने ।
उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम सम्बन्धमा किमसँग कुनै छलफल भयो कि भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा उनले किमले युद्ध नचाहेको बताए ।
“मलाई लाग्छ, उनी आफ्नो देशको संस्कृति साँच्चै बदलन चाहन्छन् ।” रोडम्यानले भने । “तर मलाई लाग्छ, उनी सो पदमा बस्न बाध्य पारिएको छ ।”
किमले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय उत्तर कोरियामा बिताएको भए पनि उनले स्विजरल्यान्ड वर्न नजिक रहेको जर्मन भाषी लिवेफिल्ड–स्टेइनहोल्ज्ली स्कुलमा पढेका थिए । पूर्वस्कुले सहपाठीहरूले उनलाई असल साथीका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनका एक स्कुले साथी जोआओ मिकाइलोले उनलाई आफूहरूले उत्तर कोरिया दूतावसका एक कर्मचारीकोे छोराका रूपमा बुझेको बताए ।
“हामीले सँगै धेरै रमाइलो गर्यौं । उनी एक असल मान्छे थिए ।” मिकाएलोले डेली विष्टसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा भने “धेरैले उनलाई मन पराउँथे ।”
स्कुलमा उनले चिनेको केटौले किमले बास्केटबल मन पराउँथ्यो र उनीसँग नाइकका थुप्रै जुत्ताहरू थियो, मिकाएलोले भने ।
अर्का सहपाठी मार्को इम्होफले पनि उनलाई सकारात्मक रूपले सम्झिए ।
“उनी रमाइला थिए ।” इम्होफले डेली विष्टले भने । “सधैँ हँसाउने । उनी हार्न मन पराउँदैनथे । जित्नु उनका लागि धेरै महत्वपूर्ण थियो ।”